Tsy misy mahita ny hatsembohana miadana sy miakatra
Izay entin'ny fanahy avy amin'ny lalina
Asccnds, - tsy misy, mayhap, rehefa afaka,
Isaky ny fahafatesana vaovao no ahitantsika ny fiverenany
Ny fomba fijery lavan'ny hazakazaka
Ny trace livcs taloha lasa.
Vol. 1 JANOARY, 1905. Tsia
Ny olana MAIKA izay nampikorontana ny sain'olombelona, ​​tsy nisy niteraka korontana kokoa noho ny tsingerin-taona na ny fiverimberina mitranga matetika.
Niezaka ny nahalala ny lalànan'ny fihodinana ireo zokiolona mba hampifanaraka azy ireo amin'ny fiainany. Amin'izao vanim-potoana izao, ny lehilahy dia mikaroka ny lalàna cyclic izay ahafahan'izy ireo mitondra tena mahasoa. Nandritra ny fotoana rehetra ny lehilahy dia niezaka ny hahita ny lalànan'ny familiana tamin'ny fahalalana satria afaka nahafantatra tsara ny fambolena tamin'ny fambolena niaraka tamin'ny fahazoana antoka izy ireo, ny areti-mifindra, ny areti-mifindra ary manome ny fanoherana ny mosary; mialoha ny ady, rivo-doza, fikorontanana ara-pomba, ary miambina amin'ny fihetseham-po; fantaro ny anton'ny fiterahana, ny fiainana, ny fahafatesana, ary ny fanjakana aorian'ny; ary amin'ny fanatsarana ny zava-niainany taloha, afaka mamolavola ireo zava-mitranga amin'ny ho avy amim-pahamarinana izy ireo.
Ny hoe tsingerin-teny dia avy amin'ny teny grika hoe "kuklos," izay midika hoe peratra, kodiarana na boribory. Amin'ny heviny lehibe kokoa ny tsingerin'asa dia ny hetsika sy ny fihetsik'ireo fihetsiketsehana avy amin'ny ivony iray, ny toetra sy ny faharetan'ny tsingerin'ny fandrefesana ny làlana sy ny fampitaovana ny fihetsik'izy ireo rehefa mandeha izy ireo ary miverina amin'ny loharanon'izy ireo. Ny fiafaran'ny fihodinana iray na faribolana dia fanombohana ny iray hafa, ka ny fihetsiketsehana dia mihetsika, toy ny fanamafisana ny kofehy na ny fametrahana ny felam-boninkazo iray.
Azo zaraina ho kilasy roa lehibe ny fihodinana fihodinana fihodinana: ireo izay fantatra ary ireo no iharan'izany. Isan'ireo izay tena haintsika indrindra dia ny tsingerin-andro iray, rehefa nanao revolisiona feno manodidina ny axis ny tany tao anatin'ny efatra amby roapolo ora; ny tsingerin'ny volana iray, rehefa nanao ny fihodinana iray eran'ny tany ny volana tamin'ny andro 28; ny tsingerin'ny herintaona, rehefa nahavita revolisiona iray manodidina ny masoandro ny tany sy ny masoandro dia nanao revolisiona iray tamin'ny alàlan'ny famantarana ny zodiak, fe-potoana eo amin'ny 365 andro; ary ny taom-pianarana na ny taom-piandohan'ny fiandohan'ireo ekoatera rehefa nitodika indray mandeha ny tsanganan'ny ekoatera tamin'ny taona 25,868.
Zava-misy ny fahalalana iraisana fa manomboka amin'ny fitsangatsanganana ny masoandro amin'ny alàlan'ny antokon-kintana misy ny zodiak, dia mahazo vanim-potoana efatra isika: lohataona, fahavaratra, fararano ary ririnina, isaky ny maharitra telo volana, ary ny tsirairay avy aminy ireo volana ireo dia zaraina ho efa-bolana sy ny ampahany, ny isan-tsegondra isam-bolana dia vanim-potoana tamin'ny volana voalohany, volana feno, volana farany ary volana vaovao. Ny zodiak no famantaranandro mahafinaritra, ny masoandro sy ny tanany izay manamarika ny fotoana. Taorian'ny zodiak dia nanangana fandaharana iray izay misy famantarana roa ambin'ny folo; izany dia manamarika ny hazavana sy ny fotoana maizina ao anatin'ny indray andro amin'ny roa ambin'ny folo ora roa.
Ny mahaliana ilay mpahay statistika sy mpahay tantara dia ny endrika fihodinan'ny fihenan'ny loza, ny loza, ny mosary ary ny ady; ny fisehoan'ny fihodinana sy ny fanjavonan'ny hazakazaka, ary ny fiakarana miverimberina matetika ary fianjanan'ny sivilizasiona.
Ao anatin'ireo tsingerin-taonan'ny tsirairay dia misy ny tsingerin'ny androm-piainana izay mandalo avy amin'ny aura manodidina ny vatana mankany amin'ny efi-habakabaka amin'ny havokavoka, izay mampiasa ny ra ho toy ny fiarany dia mivezivezy amin'ny lalan-drà ankavia mankany amin'ny aurica ankavia, avy eo mankany ventricle havia, avy eo mandalo ny aorta dia zaraina amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana ho ra. Ny fiainana ankehitriny miaraka amin'ireo sela velona dia miverina mamakivaky ireo capillaries mankany amin'ny lalan-drà, avy eo amin'ny alàlan'ny venae cavae mankany amin'ny auricle havanana, avy eo mankany amin'ny lalan'ny havanana, ary avy eo mamakivaky ny fiakaran'ny pulmonary ho any amin'ny havokavony, ary rehefa avy nodiovina izy, dia lasa mitondra ny aina ho an'ny vatana, ny tsingerin-taona feno mitaona telopolo segondra.
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny tsingerina rehetra dia ny cyclc izay ahitana ny vanim-potoana talohan'ny nahaterahana, ny fahaterahana, ny fiainana eto amin'ity tany ity, ny fahafatesana ary ny fanjakana aorian'ny fahafatesana. Avy amin'ny fanambarana amin'ity tsingerin-tany ity no hahalalanao ny fizotry ny fihodinana hafa rehetra. Mino izahay fa ao amin'ny fampivoarana ny olombelona talohan'ny nahaterahan'ny tantaran'ny planeta manontolo dia voalazan'ireo endrika rehetra.
Ny vatan'olombelona dia voafidy hihazakazaka mandritra ny fe-potoana iray, ny tsingerin'ny fiainany. Amin'ity vanim-potoana ity, ny fiainana taloha tao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia nivelona indray. Avy eo ny kodiarana fiainana dia lasa fihodinan'ny fahafatesana.
Miaraka amin'ny tsingerin'ny fahaterahana sy ny fiainana ary ny fahafatesany no niahiahy ny filozofa tranainy, satria amin'ny fahalalana azy ireo dia mety hidirany sy hivoaka avy ao amin'io bourne io, hoy izy, tsy misy mpitety miverina. Ny tanjon'ny fampivoarana ny talohan'ny nahaterahana dia ny hitaona ny singa manerantany ho vatana iray, mamolavola azy ireo ho toy ny endrik'olombelona, ​​izay manome fotoana lehibe indrindra hiainana amin'ny foto-kevitra manan-tsaina, ny saina, izay hitoetra ao amin'ny vatan'olombelona. Ny saina, ny tanjon'ny fiainana dia ny hananana fahalalana momba ny fifandraisany amin'izao rehetra izao, mandritra ary mandritra ny vatana, manatanteraka ny adidy manaraka an'io fahalalana io ary hanorina amin'ny ho avy amin'ny alalàn'ny zavatra taloha.
Ny fahafatesana no famaranana, fandinihana sy fandanjalanjana ny asan'ny fiainana, ary fomba hiverenan'ny tontolo izay eran'izao tontolo izao. Io no vavahady izay niverenan'ny fanahy ho azy.
Ny fanjakana aorian'ny fahafatesana dia ny vanim-potoana fitsaharana sy fihetsehana ny asan'ny fiainana alohan'ny niandohan'ny fiainana hafa.
Ny fahaterahana sy ny fahafatesana dia maraina sy hariva amin'ny fanahy. Ny fiainana no vanim-potoana hiasana, ary aorian'ny fitsanganana dia fitsaharana, fampodiana ary fahatokisana. Raha ny adidy ilaina amin'ny maraina dia tanterahana aorian'ny fialan-tsasatra amin'ny alina, dia ny asan'ny andro, ny adin'ny hariva ary miverina amin'ny fitsaharana, ka ny fanahy dia mametraka ny akanjony mifanaraka aminy ary mandalo ny vanim-potoana fahazazana izy ireo. amin'ny asan'ny androm-piainan'ny tena andro, ary natokana amin'ny takariva noho ny fahanterana, rehefa mandalo ao amin'ilay fitsaharana ny fanahy izay hanomana izany amin'ny diany vaovao.
Ny zava-miseho rehetra amin'ny natiora dia mitantara ny ain'ny fanahy amin'ny alàlan'ny tsingeriny, sy ny fipoahan'ny vatana ary ny reincarnations amin'ny fiainana. Ahoana no fomba hametrahantsika ireo tsingerina ireo, ny fomba hanafainganana, hampihenana na hanovana ny fihetsiny? Rehefa tena hita ny fomba dia samy mahita azy amin'ny heriny hanaovana azy izany. Ny lalana dia amin'ny alàlan'ny fisainana. Tamin'ny alàlan'ny eritreritra tao an-tsaina dia niditra tao amin'izao tontolo izao ny fanahy, tamin'ny fiheverana fa lasa mifatotra amin'izao tontolo izao ny fanahy, amin'ny eritreritra fa ny fanahy dia afaka.
Ny toetra sy ny fitarihan'izay noeritreretiny mamaritra ny fahaterahany, ny toetrany ary ny tanjony. Ny atidoha dia ilay atrik'asan'ny vatana, ny eritreritra izay namboarina tamin'ity atrikasa ity dia miverina ao anaty habakabaka hiverina rehefa ela na ho fohy kokoa ho an'ny mpamorona azy. Satria ny eritreritra noforonina dia misy fiantraikany ao an-tsain'ny olombelona mitovy amin'ny eritreritra, dia miverina amin'ny Mpamorona azy ireo ny fihetsik'izy ireo tahaka ny fihetsik'izy ireo tamin'ny hafa. Ny fiheveran'ny fankahalana, ny fitiavan-tena sy ny toy izany dia manery ny Mpamorona azy handia toy ny traikefa ary mamehy azy eto amin'izao tontolo izao.
Ny fiheverana ny tsy fitiavan-tena, ny fangorahana ary ny faniriana dia miasa ao an-tsain'ny hafa ary, miverina amin'ny Mpamorona azy, manafaka azy amin'ny fatoran'ny zaza vao teraka.
Ireo eritreritra ireo izay ataon'olombelona tsy mitsahatra mandra-pahafatiny. Tsy maintsy mitoetra miaraka amin'ireto eritreritra ireto izy, mandevona ary mampandrafitra azy ireo, samy ao amin'ny kilasy misy azy manokana, snd aorian'izay efa nataony dia tsy maintsy miverina eto amin'ity tontolo ity izy, ny sekoly sy ny mpampianatra ny fanahy. Raha jerena ny zava-misy, dia ho hita fa misy vanim-potoana eo amin'ny fiainam-piainana iray. Fotoam-pahakiviana, manjombona, famoizam-po; vanim-potoana fanitarana sy fahasambarana hafaliana; fe-potoana ambiansy na faniriana. Aoka ho voamarina ireo vanim-potoana ireo, hiady amin'ny fironana ratsy, ary manararaotra fotoana ankasitrahana.
Io fahalalana io dia tsy afaka manatona ilay olona tonga “hendry tahaka ny menarana ary tsy mampidi-doza tahaka ny voromailala.”